HIM | Health in Myanmar » 2014 » November
၅ လအကြာမှာ စစ်ရင် HIV ပိုးအတွက် အဖြေမှန်ရနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်က အဖုတွေက HIV နဲ့ သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။ သာမန် အရေပြားရောဂါ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမ တစ်ခါ Non-reactive လို့ အဖြေထွက်ထားတဲ့ အတွက် စိတ်မပူပါနဲ့ များသောအားဖြင့် ကာလသားကို သွေးစစ်ဖို့ မေ့တတ်တဲ့ အတွက် HIV သွေးစစ်ရင် တွဲပြီး စစ်ပါ။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: HIV, STD, ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
နာတာရှည်၊ ပြန်ပြင်မရအထိ ဖြစ်မယ်။ Tubal infertility ကလေးမရတာ ၁၁% မှာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Premature delivery အချိန်စော မွေးတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရေပြား၊ အဆစ်၊ မျက်စိတွေကို ဖြစ်တာ နည်းတယ်။ HIV ပိုးနဲ့ ထိစပ်မှုရှိရင် ကူးလာနိုင်ခြေ ပိုများတယ်။ တခြား STD ရောဂါတွေနဲ့လဲ တွဲဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ဆေး မကုဘဲနေရင် မြုံနေမယ်။ ပြန်ဖြစ်မယ်။
The following paragraph fromarecent press release from MSF (Holland) is key to understanding the call to strengthen the health care system in Myanmar to support the country in meeting global targets. “This includes scaling up treatment, strengthening human resources and improving the overall health and laboratory infrastructure. Furthermore, it is crucial that changes […]
This article is well done. Much better than most on the situation of people living with HIV in Myanmar. It is true that in August 2002 there was little ART available even in Yangon and none in Loikaw when Taryar left. What proportion of ART is delivered outside of Yangon and Mandalay today? I challenge […]
HIV ဗိုင်းရပ်စ်အား အလိုအလျောက် ပျောက်ကင်းခဲ့သူများ၏ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို တွေ့ရှိခဲ့
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, နည်းလမ်း, အခွင့်အရေး
HIV ဗိုင်းရပ်စ်မှာ လူ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်သွားပြီး လျှင် CD4 ခုခံအားစနစ်ဆဲလ်များ အတွင်း နေထိုင်ပြီး CD4 ဆဲလ်များ အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ထုတ်ပေးသောစက်ရုံအဖြစ် ပြောင်းလဲ ပစ်လိုက်လေသည်။ ယင်းကဲ့သို့ HIV ကူးစက်ခံထားရသူများထဲတွင် ၁% ထက်နည်းသောသူများသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုအား ထိန်းချုပ်ကာ သွေးထဲ၌ ဗိုင်းရပ်စ်အားမတွေ့နိုင် လောက်သည်အထိ ထိန်းထားနိုင် လေသည်။
လိင်ကျန်းမာရေး (သို့ မဟုတ်) လိင်မှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး နဲ့မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး
Author: Jamie Uhrig | Category: English, Myanmarno comments
I am making some postings on sexuality written by an anonymous colleague. Please feel free to let me know what you think of them. Jamie ++++++++++++++++++ လိင်ကျန်းမာရေး (သို့ မဟုတ်) လိင်မှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး နဲ့မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများဖြစ်တဲ Sexual health နဲ့ Reproductive health ဆိုလျှင် များစွာသော တူညီမှုများ ရှိသော်လည်း ကွဲပြားခြားနားချက် များစွာ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ ရသည်။ မြန်မာလို တော့ အောက်ပါအတိုင်း ဘာသာပြန် […]
You can download the final evaluation report of an IFRC community health project in Magway. It underlines the complexities involved in improving health in the communities of the Burman heartland. https://tinyurl.com/p7kszbp The project began in 2007 which isalong time ago in the climate of rapid change. Or is it? Jamie
A critical analysis of National AIDS Commissions
National AIDS Commissions used to be all the rage. UNAIDS is still advocating for multisectoral responses, even for Ebola. Myanmar used to have one. Here isacritical analysis of them. Jamie ++++++++++++++++++ Experiences and critical reflections of multi-stakeholder governance processes: the case of National AIDS Commissions Peter Godwin and Clare Dickinson IHP November 21, […]
Seenalot of media workshops over the past twenty years. Journalists write the text but editors write headlines. They need to be on board, too. And evaluations are few and far between. Is the change in quality and quantity of reporting on HIV measured? How? You can watch the Burmese language clip at https://tinyurl.com/pzz748m […]